News Collection: सँगै पनि नबस्ने डिभोर्स पनि नगर्ने
सँगै पनि नबस्ने डिभोर्स पनि नगर्ने
बलिउडकी चर्चित नेपाली नायिका मनीषा कोइरालाको जीवनमा फेरि बहार आएको छ। सम्राट दाहालसँग विवाह गरेपछि करिब एक वर्ष तनावमा बिताएकी मनीषाको अनुहारमा यसपटक पुरानो दुःख देखिएन। गएको १४ गते काठमाडौं उत्रँदा उनको अनुहारमा पुरानै खुसी छल्किएको प्रस्ट देखिन्थ्यो। 'मनीषा पुराना सबै दुःख बिर्सने प्रयासमा थिइन्, पाँच महिनाको मुम्बई बसाइपछि उनी पुरानै अवस्थामा फर्किएको पायौं।' मनीषाका एक आफन्तले साप्ताहिकसँग भने, 'हामीले पनि उनलाई पुराना कुरा कोट्याएर दुःख दिन चाहेनौं।'
करिब ४० वर्षको उमेरमा नेपाली केटासँग विवाह गर्ने सपना पूरा गरेकी मनीषाको वैवाहिक जीवन सोचेजस्तो नभएपछि उनी मुम्बई फर्किएकी थिइन्। मुम्बई पुगेको केही समयपछि नै उनले एउटा पार्टीमा धेरै रक्सी खाएको अवस्थामा सञ्चारमाध्यमले फेला पारेका थिए। उनलाई बलिउडका पुराना साथीहरूले सहारा दिएर उनको निवासस्थानसम्म छाड्नुपरेको थियो। यद्यपि यसबीच सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित उनका अनेक गसिपको प्रभाव उनको अनुहारमा देखिँदैनथ्यो।
लामो समयदेखि राम्रो चलचित्र नपाएकी मनीषाको यस वर्ष भने भाग्योदय भएको उनका निकटस्थहरूले बताएका छन्। वैवाहिक जीवनमा खटपट आएको समाचार आउनासाथ चर्चित चलचित्र निर्माता रामगोपाल बर्माले उनलाई मुम्बई बोलाएका थिए। बलिउडमा रामगोपाल बर्मा मनीषाको अभिनयबाट साह्रै प्रभावित निर्देशकहरूमध्ये एक हुन्। त्यसैले पनि उनले बर्माको भूँऊमा शीर्ष भूमिका निर्वाह गर्न पाएकी हुन्। सस्पेन्स थि्रलर कोटीको यो चलचित्रको सुटिङ सकेलगत्तै बर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर मनीषाको अभियनको ठूलो प्रशंसा गरेका थिए। यो चलचित्रलगत्तै उनले थप दुईवटा हिन्दी चलचित्र साइन गरेकी छिन् भने दुईवटा दक्षिण भारतीय चलचित्रको सुटिङका लागि कोची पुगेकी पुगेकी छिन्। 'भुँऊ' को सुटिङ सकेलगत्तै उनी रिफ्रेस हुन नेपाल आएकी हुन्।' पारिवारिक स्रोतले साप्ताहिकसँग भन्यो,
'विशेष गरी आमा-बुवा र बुहारी (भाइ सिद्धार्थकी पत्नी) युलियालाई भेट्न उनी नेपाल आएकी थिइन्।'
अनि पति सम्राट नि ?
यो प्रश्नमा भने मनीषाको परिवार र उनका साथी सर्कल केही बोल्न चाहँदैन। उनका निकटस्थहरूका अनुसार मनिषा सम्राटसँग डिभोर्स पनि नगर्ने सँगै पनि नबस्ने मुडमा छिन्। त्यसको कारण भने खुलाइएको छैन। जानकारहरू भन्छन्- मनीषाले सम्राटलाई परिपक्व हुन अझै केही समय लाग्ने बताएकी छिन्। विश्वस्त सूत्रहरूका अनुसार निकटस्थहरूसँग मनीषाले सम्राटलाई जीवनका उतारचढावहरूका बारेमा त्यति अनुभव नभएको टिप्पणी गरेकी थिइन्। यद्यपि उनी पारपाचुके गरेर आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धबाट पूर्ण अलग हुन चाहिरहेकी छैनन्। किन त ? भनिन्छ, उनी अहिले पर्ख र हेरको मनस्थितिमा छिन्।
हुन पनि मनीषा १४ गते काठमाडौं आएर २१ गते मुम्बई फर्किन्। यी आठ दिनमा उनी भारतीय राजदूतावासले आयोजना गरेको एउटा मेलामा सहभागी भएबाहेक कुनै औपचारिक कार्यक्रममा देखा परिनन्। सात रात उनले माइतीमै बिताइन्। त्यसो त उनले आफ्नो फेसबुक वालमा पनि आफू आमा, बुवा र जुलियाको नियास्रोले काठमाडौं आएको लेखेकी थिइन्। 'म आफूलाई जे मनपर्छ त्यही गरिरहेकी छु।' काठमाडौंमा आएपछि उनले लेखेको फेसबुक स्टाटसमा उल्लेख छ, 'जस्तो थकाली खाना र मीठो अचार। मलाई काठमाडौंमा यी कुरा साह्रै मन पर्छन्।' काठमाडौंबाट फर्किएपछि दक्षिण भारतीय चलचित्रको सुटिङका लागि कोची पुगेको उल्लेख गर्दै मनीषाले लेखेकी छिन्, 'जीवन फेरि पुरानै लयमा फर्किएको छ।' यता नेपालमा हुँदा उनको श्रीमान् सम्राट दाहालसँग भेट भने हुन सकेन। भेटको कुरा बेग्लै भयो, अहिले मनीषाको फेसबुक र ट्वीटरमा पनि सम्राटको अस्तित्व देखिँदैन।
जे होस्, ठूलो तनावपछि तङ्ग्रिएर फेरि मुम्बईमा जम्न थालेकोमा मनीषालाई बधाई।